Radar tafio-drivotra: inona izany, inona izany ary maha-zava-dehibe | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 03/01/2022 09:47 | Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro
Amin'izao fotoana izao, noho ny teknolojia izay novolavolaina isan'andro, ny olombelona dia afaka maminavina ny toetrandro amin'ny marina sy marina kokoa. Iray amin'ireo fitaovana ara-teknolojia hanatanterahana ny famantarana ny toetr'andro ny radar rivo-doza. Araka ny lazain'ny anarany dia afaka manampy antsika haminavina ny rahona matevina sy tsy marin-toerana mety hiteraka tafiotra.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny tafiotra radar, inona ny toetra sy ny mahasoa.
1 Inona no atao hoe radar rivo-doza
2 Ahoana ny fiasan'ny Storm Radar
3 Tantara sy fampiharana ny lasa
4 Zava-dehibe amin'ny fandrindrana sidina
Inona no atao hoe radar rivo-doza
Ny radar rivo-doza dia fitaovana lehibe izay misy tilikambo 5 ka hatramin'ny 10 metatra ny haavony ary misy dome boribory rakotra fotsy. Misy singa maromaro (antenne, switch, transmitter, receiver ...) izay mandrafitra ny radara amin'ity dome ity.
Ny faritra fiasan'ny radara manokana dia mamela ny fanombanana ny fizarana sy ny hamafin'ny orana, na amin’ny endriny mivaingana (ranomandry na havandra) na amin’ny endrika ranon-javatra (orana). Tena ilaina izany amin'ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny toetr'andro, indrindra amin'ny toe-javatra sarotra indrindra, toy ny tafio-drivotra mahery vaika na oram-batravatra, izay misy rotsak'orana mahery vaika sy static, izany hoe rehefa miangona ny orana be amin'ny toerana iray ao anaty vilany iray. fe-potoana fohy.
Ahoana ny fiasan'ny Storm Radar
Ny fitsipiky ny fiasan'ny radar rivo-doza dia mifototra amin'ny famoahana taratra taratra microwave. Ireny taratra ireny dia mandeha eny amin'ny rivotra amin'ny endrika lobe maromaro. Rehefa tojo vato misakana ny pulse, dia miparitaka (miparitaka) ny ampahany amin'ny taratra mivoaka amin'ny lafiny rehetra ary ny ampahany dia hita taratra amin'ny lafiny rehetra. Ny ampahany amin'ny taratra izay hita taratra sy aparitaka amin'ny lalan'ny radara no famantarana farany azonao.
Tafiditra ao anatin'ilay dingana ny fitarihana taratra taratra marobe, voalohany amin'ny fametrahana ny antenne radara amin'ny zoro ambony iray. Raha vantany vao voapetraka ny zoro ambony amin'ny antenne, dia manomboka mihodina izy. Rehefa mihodina ho azy ny antenne dia mamoaka taratra taratra.
Rehefa tapitra ny diany ny antenne, dia atao ny fomba mitovy amin'ny fampiakarana ny antenne amin'ny zoro iray, sy ny sisa, mba hahatratrarana zoro ambony maromaro. Izany no fomba ahazoanao ilay antsoina hoe data radar polar - fitambarana angona radara hita eny amin'ny tany sy avo eny amin'ny lanitra.
Ny vokatry ny dingana rehetra Antsoina hoe scan spatial izany ary maharitra 10 minitra eo ho eo vao vita. Ny toetra mampiavaka ny taratra taratra pulses dia tsy maintsy ho tena mavitrika, satria ny ankamaroan'ny angovo mivoaka dia very ary ampahany kely amin'ny famantarana ihany no raisina.
Mamokatra sary iray ny scan espace tsirairay, izay tsy maintsy karakaraina vao azo ampiasaina. Ity fanodinana sary ity dia ahitana fanamboarana isan-karazany, ao anatin'izany ny fanesorana ireo famantarana sandoka vokatry ny terrain, izany hoe ny fanesorana ireo famantarana sandoka vokatry ny tendrombohitra. Avy amin'ny dingana manontolo nohazavaina etsy ambony, dia misy sary navoaka izay mampiseho ny sahan'ny refin'ny radara. Ny reflectivity dia fandrefesana ny haben'ny fandraisan'anjaran'ny angovo elektromagnetika amin'ny radara avy amin'ny vongan-drano tsirairay.
Tantara sy fampiharana ny lasa
Talohan'ny namoronana ny radar orana, dia nokajiana ny vinavinan'ny toetr'andro tamin'ny alalan'ny fampitoviana matematika, ary ny meteorologists dia afaka nampiasa fampitoviana matematika mba haminavina ny toetrandro. Tamin'ny taona 1940, ny radara dia nampiasaina hijerena ny fahavalo tamin'ny Ady Lehibe II; matetika ireo radara ireo dia mahita famantarana tsy fantatra, izay antsointsika ankehitriny hoe Yufeng. Taorian'ny ady dia voafehin'ny mpahay siansa ilay fitaovana ary nanova azy ho lasa radar orana sy/na rotsak'orana.
Ny radar rivodoza dia revolisiona amin'ny meteorolojia: pahafahan'ny andrim-panjakana lehibe meteorolojika hahazo vaovao ho an'ny vinavina, Ary azonao atao koa ny mahatakatra mialoha ny fihetsehan'ny rahona, ary koa ny lalana sy ny endriny. , Ny tahan'ny sy ny mety hisian'ny rotsak'orana.
Sarotra ny fandikana ny vinavina omen'ny radar rotsak'orana, satria na dia fandrosoana eo amin'ny vondrom-piarahamonina meteorolojika aza izy io, dia tsy manome angon-drakitra manokana momba ny halavirana ny radara, ary sarotra ny mahafantatra ny toerana tena misy ny tanjona meteorolojika. Io no fiteny ampiasaina.
Mba hahatonga ny vinavina marina indrindra, ny meteorologists dia mandinika ny mety ho hetsika mandroso. Rehefa mamely ny rahona ny tara-masoandro, dia miova ny fatran'ny onja elektrômagnetika avoaka amin'ny radara, ahafahantsika mahafantatra ny toetran'ny rotsak'orana mety hitranga.
Raha tsara ny fiovana, dia manatona ny anoloana ary hitombo ny mety hisian'ny rotsak'orana; raha tsy izany, raha ratsy ny fiovana dia hihemotra ny eo aloha ary hihena ny mety hisian'ny rotsak'orana. Rehefa ampitaina amin'ny sarin'ny ordinatera ny vaovao rehetra avy amin'ny radara, dia hosokajiana araka ny hamafin'ny orana, havandra na lanezy ny anoloan'ny rotsak'orana ... Misy loko maromaro voatondro manomboka amin'ny mena ka hatramin'ny manga araka ny hamafin'ny orana. .
Zava-dehibe amin'ny fandrindrana sidina
Ny zavatra voalohany tokony holazaina dia ny radar toetr'andro dia fitaovana fijerena, fa tsy fitaovana vinavina, ka asehony antsika ny toe-javatra rotsak'orana (fafafa) rehefa angonina.
Na izany aza, amin'ny fahitana ny fivoaran'ny rotsak'orana be dia be rehefa mandeha ny fotoana, dia afaka "maminavina" ny fihetsiny amin'ny ho avy isika: hijanona amin'ny toerany ve izy? Hampandroso ny lalantsika ve izany? Ny tena zava-dehibe, afaka manomana sidina ve isika mba hialana amin'ny faritra misy tafio-drivotra sy orana?
Ny angon-drakitra nangonin'ny radara dia aseho amin'ny endrika fampisehoana samihafa. Manaraka izany dia hamaritra ireo lafin-javatra roa manan-danja indrindra amin'ny fandrindrana sidina isika ary hanondro votoaty hafa izay nalaina tamin'ny fandrefesana radara Doppler ihany koa izy ireo.
Araka ny hitanao dia tena ilaina amin'ny vinavinan'ny toetr'andro ny radar rivo-doza ary afaka manampy antsika amin'ny fandrindrana sidina. Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny radar rivo-doza sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Radar tafiotra